बेकार रोएछु ! :: Kitab Kiro - Complete Book News
बेकार रोएछु !
२०७४ असोज २८ गते दामोदर न्यौपाने
झर्रो बोली त्यसमा पनि उखान टुक्का चित्रबहादुर केसीको वेग्लै बोल्ने शैली छ । छुट्टै राजनीतिक पहिचान छ, राजनीतिमा उनको पार्टी सानो छ तर समाजमा उनको छबी उच्च र प्रतिष्ठत छ । मन्त्री हुँदा होस वा सांसद हुँदा उनको जीवन शैली उस्तै छ । लामो समयदेखि काठमाडौमा डेरा जीवन बिताउँदै आएका केसी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष हुन् । पछिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उप प्रधान तथा सहकारी मन्त्री बनेका केसी पदमा पुग्दा पनि निष्ठाकै वकालत गरिरहे । उनको यो इमान, निष्ठा र खरोपनको जग कसरी बन्यो । निडर र हक्की स्वाभाव कसरी विकास भयो । आदर्शवान केसीको कस्तो थियो बाल्यकाल ?
आदर्श र नैतिकतावान नेताका रुपमा परिचित केसी सार्वजनिक यातायतामा यत्रतत्र भेटिन्छन् । लामो समय काठमाडौको घट्टेकुलामा डेरामा बस्दै आएका छन् । उनको डेरामा पुग्दा पनि उनको सादा जीवनशैली देख्न सकिन्थ्यो ।
विहान ७ बजे उनको डेरामा पुग्दा उनी बाथरूमबाट निस्कदै थिए । सामान्य तौलिया बेरेर उनी खाटमा बसे । म सोफामा बसें ।
झण्डै दुई घन्टा उनको बाल्यकालमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरियो ।
आफू जन्मेको गल्कोटको ऐतिहासिक पक्षबाट कुराकानी शुरू गरेँ ।
एकीकरण हुनु पहिला नेपालमा २२ से २४ से राज्य थियो । त्यसमध्ये गल्कोट २४ से मा पथ्र्याे । एकिकरण भइसक्दा पनि धेरै ठाउँमा रजौटा कायम थियो । २०१५ सालसम्म त्यही गल्कोट राज्यको शासित क्षेत्र थियो उनको गाउँ ।
गल्कोटे राजा थिए भरत बम मल्ल । यिनीहरू देवानी मुद्दा छिन्थे । फौजदारीचाहिं हेर्न पाउँदैनथे । त्यहीं अड्डा थियो । झ्यालखाना थियो । जग्गा जमिन पास हुन्थ्यो । खारेजी हुन्थ्यो ।
यिनको हुकुमी शासन थियो । बेला बखतमा राजा काठामाडौं आउँथे । काठमाडौंबाट फर्कन्थे । घरको एक जना राजालाई विदाइ गर्न जाने उर्दी हुन्थ्यो । सवारी भित्राउनेमा पनि सामेल हुनु पथ्र्याे ।
‘राजालाई रैतीले जुन मर्यादा गर्नु पथ्र्याे, त्यो हामी गथ्र्याै,’ उनले सम्झिए ।
राजाको नभइ अरूले रोपाइँ गर्न पाइदैनथ्यो । राजाले धान काटेपछि मात्र प्रजाले काटथे । राजाको दाइ हालेसी रैतीले हाल्नुपर्ने ।
‘हामी केन्द्र र गल्कोटबाट शासित थियौं’ ।
राजाको अड्डामा धेरै जनाको जग्गा मुद्दा हुन्थ्यो । बुबा नरिश्वर शर्माको पनि जग्गा सम्बन्धी मुद्धा थियो । राजाका मान्छे ललितबहादुर एक दिन घोडा चढेर आए । उनलाई उर्दी लगाए छन्, ‘तेरो बा लाई ४ सय रूपैया र एउटा ठूलो खसी लिएर जा भन्दे मुद्दा जित्ने भए । न्याय निसाफ गर्ने भन्दा पनि ‘मत्स्ये न्याय’ थियो । बुबा आफैं भान्से भएकाले त्यही क्याम्पमा थिए । पैसा तिर्नु तिरेनन् । खसी पनि दिएनन् । बरू राजारानीको मान्छे भएकाले अरू किसानमाथि शासन गर्थे उनका बा । उनी निरक्षर पनि होइन, पढेलेखेको पनि होइन । उनी किसानको मुद्धा मामिला मिलाउँथे ।
मुद्धा लिएर धेरै आउँथे । अनेक गरेर सम्झाउँथे ।
‘बोल्दा बिम्ब प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो । सांकेतिक भाषामा कुरा गर्नु हुन्थ्यो । उखान टुक्का जोड्नु हुन्थ्यो । आमा पनि मुखियाको छोरी । बाठी हुनुुहुन्थ्यो,’ सुनाए, ‘बुबा बाहुन, आमा क्षेत्री । हामी बर्णशंकर । त्यही भएर टाठै थियौं । बुबाआमाको छाप प¥यो हामीमा पनि ।
ठूलो छउञ्जेल स्कुल गइएन । गाउमा अक्षर चिनेकाहरूले अंक अक्षर चिनाउने चलन थियो । फलारी सन्त पर बारीमा कुटी बनाएर बसेका थिए । तिनैले अंक अक्षर चिनाए । गल्कोटमा राजा रानीको नाममा भरत चैतन्य प्रावि खुलेको थियो । त्यहाँ जान घरबाट दुइ घन्टा लाग्थ्यो । फुपुको घरमा बसेर पढ्न थालें ।’
त्यतिबेला पौडी खेल्न सिपाल भइसको थिएँ । घर छेउमै दरौं खोला बग्थ्यो । त्यहाँ एकपटक माछा नमारेसम्म, पौडी नखेलेसम्म चित्तै बुझ्दैनथ्यो ।
‘म अलि उट्पट्याङ पाराको थिएँ । स्कुल जानासाथ साथीहरूलाई लौ केटा हो पौडन जाउँ भनेर खोलातिर लागें । लुगा खोलेर म पसें । पौडिएँ । म पौडेको देखेर अरू पनि पसे,’ उनले सम्झिए, ‘विचराहरूलाई पौडन आउँदो रहेनछ । नजान्ने त नपस्नु नि । पसिगए । बर्खाको बेला । खोला उर्लेको थियो । सबैलाई बगायो । केटकेटी बगायो भनेर हल्ली खल्ली भयो । खेतबारीमा काम गर्ने सबैले छोपेर बचाए । भोलिप्ट तिनका बाउ आमा फुपुकोमा आए । तिम्रा भदालाई गाली गर भन्दै फर्किए ।’
८ वर्ष छँदा गोठमा वस्थे । एउटा बुढो गोरू थियो २५ रूपैयमा किनेको । त्यो एक दुइ बल्ड्याङ खाँदै उठ्दै गथ्र्याे बेलाबेलामा । एक दिन बल्ड्याङ खाँदै धेरै तल पुग्यो । त्यो उठ्दै उठेन ।
‘हेर्न गएँ । मरेछ । रूदै घर गएँ । बालाई सुनाएँ । त्यो त मर्ने बेला भएको थियो । गाउँको दलबहादुर नेपालीलाई लैजा भनेको मानेको थिएन,’ उनले सुनाए, ‘मरेछ, राम्रै भयो भन्नु भयो । मलाई लाग्यो, ए गोरू मरेको त राम्रै रहेछ । बेकार रोएछु !
फेरि गोठ गए । साउने झरी दर्केको थियो । गाइ चराउँदा दौरा भिज्यो । दौरा मात्रै लगाएका थिए । गोठमा मुढा बालेको थियो । त्यही मुढामाथि सुकाए । एकै छिनमा गाइ आयो । दौरा चाट्यो । त्यो फाहोर थियो । फोहोर भएकाले नुनीले रहेछ क्यार ∕ धमाधम खाइदियो ।
‘म खोस्न गएँ । केही सिप लागेन । पूरै खाइदियो । नांगै भएँ । रूदै रूदै घर गएँ । बालाई सबै बताएँ,’ सम्झिए, ‘बाले भन्नुभयो, ठिक भयो । दौरा थोत्रो थियो । अर्काे किन्ने बेला भएको थियो । खाइदिएछ ठिकै भयो । फेरी मलाई लाग्यो, दौरा खाएर ठिकै गरेछ । बेकार रोएछु ∕ रोएकोमा फेरी पछुतो लाग्यो ।’
उनका बाका तीन श्रीमती रहेछन् । छोरा मात्रै १४ जना । हजुरबाले गुलरियातिरबाट नाङलो जत्रो थाल ल्याएका रहेछन् । त्यो थालमा ६ जनालाई भाग लगाइदिन्थे । ठूला दिदीहरू गामगुम खाइदिन्थे । साना खानै पाउँदैनथे । ठूलाले खाइसक्थे अनि सानालाई थप्न अह्राउँथे ।
त्यही निहु“मा झगडा पथ्र्याे ।
केसीको बाल्यकामा कति बाललिला थियो होला ? मलाई जान्ने मन थियो । बाललिला नहुने कुरै भएन ।
‘मेरा साथीसंगत विश्वकर्मासँग बढी थियो । खेल्न जान तिनै हुन्थे । घास काट्ने साथी तिनै थिए । राती काक्रो र्चार्न तिनैलाई लिएर जान्थें । घरको आगनमा थाक्रो हाल्थे पालीमा चढाइन्थ्यो काक्रो । त्यहाँबाट छानोमा जान्थ्यो,’ सुनाए, ‘राती त्यही छानो चढ्न उकासि दिन्थे । चोरेको थाहा पाएपछि एक मुड्की हान्ने चलन थियो । त्यसलाइ ‘काक्रे मुड्की’ भन्थे ।
दिदी बाख्रा हेर्न जाने । उनी सानै रहेछन् । दिदीसँग जान रहर लाग्थ्यो । दिदी लैजान नमान्ने । सानो बालक लगेसी झ्याउ हुने भन्ठादी रैछिन् । उनलाई रूख या थाममा बाधेर जाने । बा आमाले फुकाइदिंदा रहेछन् ।
‘ढुंगा बोकेर कुरेर बस्थें दिदीलाई हिर्काउन,’ उनले सुनाए ।
२०१४ सालमा डा. केआइसिंह प्रधानमन्त्री भएपछि रजौटा उन्मुलन भयो । गल्कोटको देवानी अड्डा खारेज भयो । राज्य गएपनि अड्डा कायम राख्ने माग लिएर राजाले बासहित ७ जनालाई महेन्द्रकोमा पठाउने भए ।
‘हाम्रो घरमा नुन सकिएको थियो । हामी तिब्बती नुन खान्थ्यौं । भारतीय नुनले लुतो आउँछ भन्थे । अन्नसित नुन साट्ने चलन थियो,’ सुनाए, ‘१० पाथी गहु लिएर म पनि बा संगैं बागलुङ गएँ । एक दिन लाग्यो त्यहाँ पुग्न । बाले बेडिङ बोक्ने भरिया पाउनु भएन त्यहाँबाट । उहाँ भारी बोक्नु हुन्नथ्यो । मलाइ पोखरासम्म लगिदे भन्नु भयो । हामी बाउ आमाको आज्ञाकारी थियौं । अनुशासित थियौं । बचन भुइमा नखस्दै हस भन्थ्यौं । पोखरा आइयो । त्यहाँ आएपछि बालाई दुइदिनको बाटो यो कसरी जान्छ भन्ने लागेछ ।’ काठमाडौं हिंड् भने बुबाले । त्यतिबेला पोखरा काठमाडौं प्लेन भाडा ६० रूपैया थियो ।
नक्सालमा गल्कोटे राजाको दरबार थियो । राजा उतै थिए । रानी यही रहिछन् । उनलाई यही राखेर पढाउने कुरा गरिन् । बा बस्दा मिठै खान दिइन् । अब राजा पनि रहेनन्, अड्डा पनि थामिएन । बा फर्किए । रानीले उनलाई राख्नुको भित्री उद्देश्य भाडा मझाउनु रहेछ । पाहुना धेरै आउने । त्यही भएर भाडा माझ्ने टिक्दा रहेनछन् । बा फर्कपछि मेरा दुखका दिन शुरू भए, उनी सम्झिए ।
‘अकरमा परियो अब । भाडा माझ्ना थालें । ४ महिना बसें । आमालाई चिठी लेखेर पूर्णहरि मितबालाई पठाएँ । घर फर्कने खर्च भएन, पठाइदिनुस् भनें । आमाले कानमा लगाएको ४ तोला सुन पठाइदिनु भयो । त्यो सुन इन्द्रचोकमा ३ सय ९८ मा बेचें । ४ सय देउ न भनेको मान्दै मानेन्,’ सम्झिए, ‘त्यति पैसा हात परेपछि घर जानै मन लागेन । अब पढ्छु भन्ने लाग्यो । दरबारबाट विद्रोह गरेर निस्कें । महिनामा ५ रूपैयाँ तिर्नु पर्ने कोठा भेटटएँ । सरिहालें ।’
नन्दी किशोरी रात्री पाठशालामा भर्ना भए , ३ वर्षभित्रमा एसएलसी गराउने उनीहरूको योजना थियो । साक्षर हुनेलाई त्यो कक्षामा भर्ना लिन्थे । शुल्क २ रूपैया थियो ।
‘मेहनत गरेर पास गरें । सरहरूले प्रथम श्रेणीमा पास गर्छ भन्थे । तीन वर्षभित्रै पास गरें । त्यही स्कुल पढ्दा कम्युनिष्ट पार्टीको सम्पर्कमा गएँ,’ सुनाए, ‘वसन्तपुरमा केन्द्रिय कार्यलय थियो । त्यहीं गएर सदस्यता लिएँ । मलाई कम्युनिष्ट प्युठानका सिद्धिमान जिशीले बनाएका थिए । पछि उनै दरबारतिर छिरे । पञ्चायत सभापति भए । माननीय भए । मलाई समेत पार्टीबाट छुटाउन कोशिश गरे । मैंले उनलाई गुरू मानें तर उनले भनेको मानिन् ।’
नानीदेखि लागेको बानी छुटाउन नसक्दा दुख पनि पाएछन् । माछा मार्ने, पौडी खेल्ने बानी लाग्यो । त्यो बानी छुटाउनै सकेनछन् । ठूलै समस्यामा पा¥यो त्यो बानीले । पहिला पढेकै स्कुलमा पढाउन गएछन् ।
त्यतिबेला पार्टी प्रतिवन्धित भयो । बागलुङ सेक्रेटरी रहेछन् । अब भूमिगत जानु पर्ने भयो । एमाले नेता झलनाथ र उनी सँगै मास्टर थियौं । सरकारले दमन शुरू ग¥यो । धरपकट भयो । पार्टीले सबै पक्रेर भएन, तपाईं भूमिगत हुनपर्छ भन्यो । पार्टीको रणनीति बनाउन बैठक बस्यौ ।
‘बैठकमा मेरै बारे छलफल भयो । मेरो मञ्जुरी माग्दै भने, ‘भूमिगत भएपछि तपाईको हेडमास्टरी जान्छ नि ∕’ मैंले भनें, जावस् । ‘सरकाले खोजेर मार्न सक्छ नि ∕’ मारोस् । ‘सम्पत्ति हरण गर्न सक्छ नि ∕ गरोस् । सबैमा मञ्जुरी दिएँ । मेरो बानी थाहा पाएको एउटा साथीले हाँसो गर्दै अर्काे मञ्जुरी लिए, ‘खोलामा माछा मार्न पाइँदैन नि ∕’
सबै स्वभाविक लागेको थियो । ‘मुखैले त भनिन तर मनले भन्यो,’ उनले सुनाए, ‘खोलामा जान नपाए कसरी सकुँला ?’
भूमिगत भए । केही दिन खोलामा गएनछन् । एकदिन साथीको आँखा छलेर माछा मार्न गएछन् । साथी रिसाए । आलोचना गरे ।
‘त्यसको परवाह गरिनँ,’ सुनाए, ‘पार्टीको नीति उल्लंघन गरिदिएँ । अनुशासन तोडिदिएँ । कट्टु मात्रै लगाएर खोलामा पसेको मात्रै के थिएँ, ५ जना पुलिस आए । झ्यापझुप समातेर लगे ।’ मलाई बुद्धि फ्र्यिो ‘मान्छो आदतको कमारो रहेछ ।’
(पत्रकार दामोदर न्यौपानेको ‘स्वर्णिम समय’ असोज २८ गते विमोचन हुने पुस्तकबाट) ।